YEYINTNGE(CANADA): Saturday, March 17
အသိမ်းခံ လယ်မြေပေါ်က လယ်သမားတွေရဲ့ဘဝ
Uploaded by BurmaVJMedia on Mar 17, 2012
လှိုင်သာယာမြို့နယ်နဲ့ ထန်းတပင်မြို့နယ်ကြား လယ်မြေဧက ၃၀၀ ကျော်ကို ဝါဝါဝင်းကုမ္ပဏီက သိမ်းယူထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းပဒန်ကျေးရွာသားတွေ အနေနဲ့လဲ ဓားမဦးချလုပ်ကိုင်နေတဲ့ လယ်မြေတွေ ဖြစ်တာကြောင့် အဲ့ဒီ အသိမ်းခံလယ်မြေတွေပေါ်မှာ မိုးစပါးစိုက်ပျိုးဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ဆောင်ရွက်တဲ့ လယ်သမားတွေကို ဝါဝါဝင်းကုမ္ပဏီက ပိုင်နက်ကျူးလွန်မှုနဲ့ သောင်ကြီးရဲစခန်းကို အမှုဖွင့် တိုင်ကြားခဲ့တဲ့ အတွက် သောင်ကြီးရဲစခန်းက မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေ ၄း၀၀ နာရီအချိန်မှာ လာရောက် ဖမ်းဆီးသွားခဲ့ပါတယ်။ အတွင်းပဒန်ကျေးရွာက လူကြီးတွေက အာမခံနဲ့ လာရောက်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက် ညပိုင်းမှာတော့ လယ်သမား အယောက် ၅၀ ကျော် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လယ်သမားတွေ ပြင်ဆင်နေတဲ့ လယ်မြေတွေနဲ့ လယ်အတားအဆီးတွေကိုတော့ သောင်ကြီးရဲစခန်းက ရဲသား အယောက် ၃၀ ကျော်လောက်က လာရောက်ဖျက်ဆီးနေပါတယ်။ အခုလို အဓမ္မ လယ်မြေသိမ်းဆည်းခံရမှုအပေါ် တရားသဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ILO ကို စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးတိုင်ကြားထားတယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/17/20120အကြံပြုခြင်း
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရှိုးမြို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ခရီးစဉ်43 photos of BVJ
ဧပြီလ (၁) ရက်နေ့မှာ ကျင်းပမယ့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ကိုမဲပေးကြဖို့ တင်ဆက်ထားတဲ့ Vote NLD Campaign ဗွီဒီယို
Uploaded by MyanmarCelebrity on Mar 16, 2012
Here is the campaigning video for coming by-election. Myanmar famous actors, Lu Min, Wai Lu Kyaw, Wyne, Ye Deight, Tun Eaindra Bo, Chit Thu Wai and others star for this film.
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 3/17/2012 1 အကြံပြုခြင်း